MINISITRA CHABANI NOURDINE : Baikon’ny mpanao aferam-bary hiaro ny tombotsoany
Lasa sinema tanteraka ny fitadiavam-bahaolana ataon’ny fitondrana Rajaonarimampianina momba ny fidangan’ny vidim-bary eto Madagasikara. 11 décembre 2017
Mbola manaloka ny minisitry ny varotra sy ny fanjifana Chabani Nourdine ny andraikitra nisy azy mialohan’ny naha voatendry azy ho minisitra. Izy izay efa filohan’ny Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie de Madagascar na Fccim. Mazava fa fiarovana ny tombontsoan’ny mpandraharaha ny asa niandreketany tamin’izany fotoana izany.
Voasoratra mibaribary ao anatin’ny CV an’i Chabani Nourdine ny naha mpiaro ireo mpandraharaha azy tamin’ny alalan’ireo andraikitra notazominy. Izy rahateo izay sady mpandraharaha ara-toekarena. Ny taona 2016, dia izy no filohan’ny Goedra na Groupement des Opérateurs pour le Développement Economique de la Région Anosy. Ny taona 2008 hatramin’ny 2011, dia i Chabani Nourdine no filohan’ny Antenimieran’ny varotra sy indostria tao amin’ny faritra Anosy sy Androy. Ny taona 2011 ka hatramin’ny 2016, dia izy no filohan’ny Fivmpafa na Fivondronan’ny mpandraharaha faritra Anosy.
Ny volana septambra 2010 ka hatramin’ny avrily 2016 no naha filohan’ny Fccim azy. Izy voatendry minisitra no namarana ny andraikiny.
Manoloana ny fikaroham-bahaolana momba ny fiakaran’ny vidim-bary, dia hita ho manaloka ny minisitra Chabani Nourdine hatrany ny maha akaiky azy be loatra an’ireo mpandraharaha ka lasa sakana amin’ny fampidinana ny vidim-bary. Ny loharanom-baovao no nahalalana fa ny alarobia 6 desambra lasa teo, dia nahatratra vary amina gony maro tsy misy fakitiora ara-dalàna teny amin’ny lalam-pirenena faharoa tsy lavitra an’Antsarimasina ny Task force Toamasina misahana ny fanaraha-maso ny vidim-bary. Tsy niandry ela ny Task force fa nisakana avy hatrany an’ilay fiara nitondra ireo vary ary nikasa hanageja an’ireo vary.
Ramatoa iray izay mpandraharaha no sady havana akaikin’ny minisitry ny varotra anefa no voalaza fa tompon’ireo vary halefa any Antananarivo ireo. Manoloana izany indrindra, nilatsaka ny antso avy tamin’i Chabani Nourdine hoe : « avelaonareo handeha izany vary izany ». Ny loharanom-baovao hatrany no nahalalana fa tsy faly tamin’izao fihetsika izao ny Task force vary ao Toamasina. Tsy misy varany ny ady atao amin’ny fanaraha-maso ny vidim-bary sy fivezivezen’ny vary ao Toamasina raha io hatrany ny fomba fiasan’ingahy minisitry ny varotra.
Mazava izao fa ireo mpandraharaha vary sy mpanao aferam-bary no mibaiko ny minisitry ny varotra sy ny fanjifana, Chabani Nourdine. Tsy sahy mangeja an’ireo mpandraharaha namany ny minisitra. Ireo mpandraharaha ireo izay sady misy havany rahateo. Mifankalala tsara izy sy ireo mpandraharaha noho ireo andraikitra nisy azy hatramin’izay. Sinema sy fisehosehoana sisa ny ambiny ka ny vahoaka malagasy no mizaka ny vokany.